Bilaogera Maraokana Mitokona Ho an'i Erraji
Maraoka24 Janoary 2018
Raha nosamborina tamin'ny herinandro lasa ilay bilaogera Maraokana Mohammed Erraji, nitodika avy hatrany tamin'ny raharaha momba an'i Fouad Mourtada ny tontolon'ny bilaogy Maraokana. Tahaka ny nataon'izy ireo tamin'i Mourtada tamin'ny niatrika fampidirana am-ponja, nihetsiketsika ny bilaogera Maraokana mba hanohana an'i Erraji.
Afrika Mainty24 Janoary 2018
Tamin'ny Sabotsy 10 May ny Pangea Day, ary nivory ny olona avy amin'ny faritra maro manerana ny tany mba hijery ireo sarimihetsika sy handray anjara amin'ny zava-misy erantany. Tamin'izany, nasehon'ireo sarimihetsika, mpandahateny ary mozika antsika ny sombim-piainana any amin'ny faritra hafa eto amin'ny bolantany, mampivondrona ireo olona avy amin'ny seha-piainana...
Ejipta23 Janoary 2018
Yemen20 Janoary 2018
Ejipta19 Janoary 2018
Tonizia18 Janoary 2018
Voatendry ho Sekreterampanjakana misahana ny Fanatanjahantena sy ny Tanora ao amin'ny governemanta vonjimaika vaovaon'ny Tonizia i Slim Ammamou, bilaogera, mpikatroka ary mpiaramiasa amin'ny Global Voices , nanomboka niraraka ny fanehoankevitra tao amin'ny tambajotra sosialy.
Maraoka: Soloin'ny Casa Negra Tena Any Amin'ny Oscars
Maraoka17 Janoary 2018
Voafidy hisolo tena an'i Maraoka any amin'ny fifaninanana lokan'ny Academy (Oscar) 2010 ilay sarimihetsika maraokana Casa Negra. Ato amin'ity lahatsoratra ity no ahitàna ny fanehoankevitr'ireo mpitoraka bilaogy momba io sarimihetsika io.
Netizen Report: Nosakanan'ny Manampahefana Iraniana Ny Tranonkala Iraisampirenena Sy Ny Sehatra Fandefasan-kafatra
Iràna16 Janoary 2018
Ny Netizen Report an'ny Global voices Advocacy dia manome topimaso iraisampirenena momba ny fanamby, fandresena sy ny vaovao malaza momba ny zo aterineto manerantany.
Afrika Mainty16 Janoary 2018
Tetikasa Hivos sy VPRO TV any Holandy ny Metropolis TV, izay mampiray ireo mpanatontosa horonantsary sy ireo mpanao gazetin-dahatsary manerantany mba handrakitra an-tsary sy hampita ny lafiny samihafa amin'ny fiainana sy ny kolontsaina any an-tanindrazany.